Ukuhlanya kunye nokuThengisa | Martech Zone
Ukuhlanya kunye nokuThengisa
NgoMvulo, Novemba 19, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
U-Pat unesinye isithuba esihle kwibhlog yakhe malunga nentsingiselo e-Australia apho abaxhasi bezemidlalo bebona ukwehla kolwazi lwe-brand-nangona beqhubeka nokwenza izinto ezifanayo. Ithini inkcazo yobudenge?
Ukuhlanya kwenza into enye kwaye ulindele iziphumo ezahlukeneyo.
Intengiso kunye neNtengiso yegeza
Naphi na apho sifumana i-Arhente yeNtengiso okanye iQumrhu lokuThengisa, sikufumanisa oku akunjalo? Abantu bathanda ukuwuthanda owabo umsebenzi, bayityeshele idatha, kwaye baqhubeke nokusebenza kwindawo yabo yokuthuthuzela:
Iiarhente ezinkulu kwiFlash zakha iindawo ezintle, ezisebenzisanayo eziphumelela amabhaso kodwa akukho mntu unokuzifumana ngenxa yokuba engazinanzi seo.
Abathengisi abaninzi bayakutyeshela ukulula kokujolisa kumxholo wakho kwi-Intanethi kwaye uzibuze ukuba kutheni umxholo wabo ungabambeleli.
Iividiyo ezinxibelelanisi zakha iisayithi ezinobunzima bebhendi ngaphandle komxholo wokubhaliweyo wokuxhasa umfundi oqhelekileyo.
Abathengisi bebrand bayaqhubeka nokufaka isicelo kwi-chunk nganye yomxholo kwiwebhusayithi yabo, bengawananzi amathemba abo ' mfuneko kunxibelelwano lomntu, ukungafihli nokunyaniseka.
Abathengisi abagxotha imithombo yeendaba kwi-Intanethi kuba kubonakala kungabizi kakhulu. Ukuba imveliso yakho sisixhobo esifanelekileyo, amaphepha etyheli okanye intengiso ehleliweyo kwimagazini ekujoliswe kuyo inokuba nembuyekezo enkulu kutyalo-mali lokuthengisa.
OlonaPhakathi luPhakathi kusenokwenzeka ukuba lolona hlobo luLindelekileyo
Wonke umthengisi okanye iarhente igqwesa kwiindlela ezithile, kodwa kunqabile ukuba iarhente okanye umthengisi angayikhathaleli okanye ayilahle imimoya enokuba luncedo. Umabonwakude, unomathotholo, iphephandaba, i-imeyile ethe ngqo, ukuthengisa ngomnxeba, amaphepha amthubi, ukuhlelwa, inkxaso-mali, uthando, ukhuphiswano, izifundi, ubulungu, ukubhloga, ividiyo ekwi-intanethi, intengiso yokuhlawulwa ngonqakrazo olunye, intengiso ye-imeyile, uthungelwano lwentlalo, ukukhangela iinjinjini zonke - zonke Ezi ziindlela do fikelela ebantwini. Nangona kunjalo, kukho izizathu zokuba kutheni nganye yezi inokunceda okanye ide ithintele iinzame zakho zokuthengisa.
Abathengi kunye namashishini akhangela kuwe
Eyona nto iphambili ekukhetheni umxube wakho wentengiso kuvavanya ezo ndlela, ukuthelekisa ezinye (ezifanayo) iziphumo zabathengisi, ukufunda amaphepha amhlophe, ukulandela ezona ndlela zilungileyo, kunye nokufumana eyona mxube usebenza ukuze ufumane imbuyekezo efanelekileyo kutyalo mali. Abathengisi bayakhalaza ukuba Ukuqwalaselwa kwabathengi kuyancipha kodwa andivumi kwaphela. Abathengi bazama ukufumana nina xa unemveliso elungileyo okanye inkonzo, nokuba yeyeshishini kumthengi, okanye ishishini kwishishini. Kungumsebenzi wakho ukubeka ulwazi oluchanekileyo phambi kwabo ngexesha nendawo efanelekileyo.
Umxube wokuThengisa ukuTshintsha kunye nexesha
Kukho inqanaba lesithathu kwintengiso kwaye lelo lixesha! Sivame ukujonga ukuthengisa njengetshathi yepayi, ukubala isiqwenga ngasinye sepayi kunye neepesenti zezixhobo zokuthengisa ezifanelekileyo Kodwa ukuthengisa akusebenzi ngoluhlobo. Xa uqala ukwazisa inethiwekhi yoluntu, umxube wakho wemithombo yeendaba unokuba kukuhlawula ngokuthe-cofa intengiso kwaye mhlawumbi uxhasa ukhuphiswano lokwakha ukufunda kwasekuqaleni. Nangona kunjalo, nje ukuba unamalungu aneleyo okuzinzisa ukukhula, izixhobo zakho zinokuchithelwa bhetele ekuphuculeni injini yokukhangela kuba oko kuya kubangela umxholo wabasebenzisi bakho ukwakha ukukhula okongezelelekileyo.
Misa ubuhlanya kwaye uzityhale ngokuchasene nesigqibo sakho esingcono! Unayo indawo yokugcina izixhobo onayo, akukho mbumbulu yesilivere.
tags: Ukuphicothwa kweBrandlogo yomnatha wabantwanachrome logologo yehowilogo logologo ye-google chromeIsikhundla segama elingundoqologoixesha elideamagama angundoqo we-longtail
Iintsuku ezili-10 ngasekhohlo: Ithuba lakho lokuphumelela i- $ 1,000 ngama-50%!
Iintengiso kwiphepha lasekhaya?
Novemba 19, 2007 ngo-1: 00 PM
Ndiqale ndafunda laa ngcaciso yobudenge kwi-zig ziglar, nangona ndingazi ukuba ngubani oza naloo nto kuqala. Kuthathe ixesha elide ukuzika, kodwa ngumyalezo obalulekileyo ekufuneka uviwe.